अब कहिले शहर जान्न | www.samakalinsahitya.com
शहरको मान्छे देख्यो कि डर लाग्छ, अब म शहर कहिले पस्दिन भन्ने सुन्तलीको भनाइले, उनको त्यो भनाइमा गहिरो अर्थ रहेको संकेत गर्यो। र त्यसैले पनि अझै प्रष्टसँग बुझ्न मन लाग्यो, त्यसको अर्थ वा भनौ उनको शहरप्रतिको त्यस्तो अनुभूति। एक किसिमले भन्ने हो भने म ब्यग्र नै भए, सुन्तलीको वर्तमान र विगत दुबै थाहा पाउन। मेरो मुखबाट निसक्यो – के गरे त्यस्तो शहरका मान्छेहरुले, हँ सुन्तली? सबैले उनलाई सुन्तली भनेको हुनाले मैले पनि सुन्तली भने। उनको वास्तविक नाम के थियो मैले थाहा पाउने प्रयास गरिन पनि।
सुन्तलीले उम्लिंदै गरेको गरेको दुध र पानीमा चिया पत्ति हाल्दै ग्राहकहरुलाई भनिन् “‘एकै छिन है दाइहरु, चिया पाक्नै थाल्यो, धेरै बेर लाग्दैन। एकै छिन उम्ल्योस, है।’
सुन्तलीको चिया झै मेरो मनमा पनि धेरै प्रश्नहरु उम्लिरहेका थिए र ती प्रश्नहरु पोखिन खोज्दै थिए, सुन्तली माथि। मैले फेरि प्रश्न गरे- सुन्तली, ती शहरका मान्छेले के गरे त्यस्तो? हामीले पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो।
सुन्तली एकै छिन घोरिइन्। उम्लिंदै गरेको चिया चलाउँदै भनिन् ‘के कुरा गर्नु त्यहाँको, त्यस्तो? छि, घिन लाग्दो कुरा। कहिं कतै मुलुक संसारमा त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ? भन्नुस त, सर।’ हाम्रो पूर्व कुराकानीको क्रममा म कुनै अफिसको कर्मचारी हो र पहाडको कुनै गाउँमा रहेको कुनै अफिसको निरिक्षण गर्न त्यतातिर लागेको भन्ने कुरा सुन्तलीलाई थाहा भइ सकेको थियो। त्यसै कारण उनले मलाई सर भनेको हुनु पर्छ।
मेरो कुरा सुने पछि सुन्तलीले मेरो मुहारतिर अप्रत्यासित किसिमले हेरिन। तर निमेष भर मै भन्न आरम्भ गरिन ‘त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ दाइ?’ यो एउटा वाक्य बोले पछि चुप लागिन। एकै छिनको मौनता पछि फेरि भनिन् ‘म मुग्लिनको एउटा होटलमा काम गर्थ्ये। ऊ, त्यो होटलमा महिनामा दसौं पन्द्रौ चोटि आउँथ्यो। त्यही खाना खानथ्यो र कहिले ट्रकमा तर धेरै जसो होटलमा नै सुत्थ्यो। ट्रक चलाउथ्यो। कहिले बीरगंज त कहिले बिराटनगरबाट, कहिले भने भैरहवाबाट पनि सामान पुर्याउन का लागि काठमाडौ ल्याउँथ्यो। जहिले पनि सोधे भने उसले भन्थ्यो ‘सामान मात्रै साउको हो, ट्रक त मेरो नै हो। तर म उसको ट्रक देखेर, धनी होला भनेर उसको पछि लागेको भने थिइन्, है। मलाई त उसको मिठो कुराले पो रक्सीले झै लठ्याएको थियो। रक्सीको नसमा रहेको मान्छेले जता पनि आनन्द नै आनन्द देखे झै म पनि उसको कुरा सुनेर हराउँथे कल्पनाको संसारमा। पुग्थ्ये कता कता। जता पनि उसको माया पोखिएको देख्थ्ये। मन भरि आनन्द नै आनन्द हुन्थ्यो।’
ग्राहकहरु सबै हिंडि सकेका थिए। हामी दुई मात्र भएको स्थितिले सुन्तलीलाई खुलेर कुरा गर्न झनै सजिलो पारेको थियो। सुन्तलीले फेरिन भनिन् ‘ऊ सुतेको कोठामा गएर म राति निकै बेरसम्म कुरा गर्थ्ये। कहिले काहिँ त रातभरि नै। तर त्यस्तो अरु कुनै मान्छेसँग कहिले पनि गरिन। उसँग मात्र त्यस्तो……… भएको थियो। कुरा गर्दा जहिले पनि उसले भन्थ्यो ‘हेर सुन्तली, हाम्रो माया पनि यस दुनिया त्यसरी नै अविरल रहि रहनेछ जसरी यो त्रिशुली नदीमा पानी। यो त्रिशुली नदीको पानी झै हाम्रो माया पनि संगलो र पवित्र छ। मेरो माया यो त्रिशुली नदीको दुई किनार हो अनि त्रिशुली नदीको पानी चाहिँ तिम्रो माया। जसरी नदीका दुइ किनारहरु र पानी जहिले पनि साथै हिंडछन् त्यसरी नै हामी हिँड्ने छौ। यो जुनीमा मात्र होइन, अर्को जुनीसम्म। अर्को जुनी त के सात जुनीसम्म। हामी सँधै साथ रहने छौ। हाम्रो साथ जुन र आकास जस्तो हुनेछ। जहिले पनि मिलेर बस्ने। कसैले हामीलाई छुटाउन सक्ने छैन। बुझ्यौ सुन्तली।’
यति भनेर सुन्तली एक छिन चुप लागिन। सफा गरेका गिलासहरुलाई मिलाइर पर राखिन पनि। तर उनको मौनता भने निकै बेर कायम रह्यो। मनको मौनतालाई तोड्द मैले प्रश्न गरे- सुन्तली, त्यस पछि के भयो?
मतिर हेरेर भन्नुको साटो उनले चुल्होतिर हेरेर भनिन् ‘म दङ्ग परेको थिए। होटलको साउको कचकच सुन्दा सुन्दा दिक्क लागेको थियो। त्यसबाट छुटकारा पाइने भयो भन्ने मनमा पनि लागेको थियो। त्यति मात्र हो र, अब घरजम गरेर नै बस्न पाइयो। एउटा भरपर्दो मान्छे जिवन बिताउनका लागि भेटियो। दुख सुख साट्ने अशल साथी पाइयो भनेर टुङ्गोमा म पुगेकी थिएँ।’
यति भनेर सुन्तली केही क्षण चुप लागिन। म भने उनको विगत जान्न ब्यग्र अझै थिएँ। मेरो मुहारको ब्यग्रता बुझ्दै उनले भनिन् ‘मलाई अति नै उसले माया गर्थ्यो। जहिले पनि काठमाडौंबाट फर्किँदा मेरो लागि केही न केही ल्याउँथ्यो। साडी, जुत्ता त कति दियो कति। त्यति मात्र हो र! कानमा लगाउने एक जोडि टप पनि दिएको थियो। अनि टप दिँदा हाँस्दै भनेको भनेको थियो- तिलहरी र पोते चाहिँ अहिले होइन त्यै बेलामा दिन्छु, जुन बेलामा केटाहरुले दिने गर्छन, केटीलाई। त्यै बेलामा, बाजा बजाउने बेलामा, दिउँला है। उसको त्यो कुरा सुनेर म आकाशमाथि पुगेकी थिएँ। मन भित्रको खुसी मेरो पखेटा बनेर त्यसले मलाई मलाई आकाश माथि पुर्यायो।’
सुन्तलीको पछिल्लो कुरा सुनेर म अलि थप आश्चर्यमा परे। मेरो थप आश्चर्य थियो सुन्तलीका साहित्यिक कुरा। यस्ता कुरा सुनेर म ज्यादै दङ्ग परेको थिएँ। उनको त्यो पछिल्लो भनाईलाई बिचमै रोक्दै मैले प्रश्न गरे- तिम्रो यस्तो कुरा गराइले त लाग्छ तिमी पढे लेखेकी नारी हौ, कसो सुन्तली?
सुन्तलीले तत्काल जबाफ दिइन। ‘एस यल सी पास गरे नि, गाउँ कै स्कूलबाट।’
मैले तत्काल नै प्रसंग परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले भने ‘अँ त्यस पछि के भयो त, हँ, सुन्तली?
सुन्तलीले भनिन् ‘ऊ, मैले काम गर्ने होटलमा आउने र राति त्यहाँ बस्ने क्रम लामो समय सम्म चलिरह्यो। एक वर्ष भन्दा पनि बढीसम्म। अनि हाम्रो भेटघाट र कुराकानीको क्रम पनि त्यसरी नै बाक्लो हुँदै गयो। पछि त कस्तो पनि हुन थाल्यो भने ऊ होटलमा बास बस्न न आएको दिनमा, उसलाई नभेटेको दिनमा, मैले केही ज्यादै नै वहु मूल्य कुरा हराएर खोज्नु पर्ने जस्तो भयो। त्यति मात्र हो र? ऊ नभएमा म त बाँच्न नै नसक्ने स्थितिमा पुगे। त्यस्तो सम्मको अवस्थामा पुर्यायो मलाई उसको त्यो पापी मायाले।’
सुन्तलीले आँखाको आँशु पुछ्दै फेरि भनिन् ‘एक चोटि ऊ काठमाडौ गएको एक महिना भन्दा बढी हुँदा पनि फर्केन। म यता पानी बिनाको माछा हुन थाले। आफूलाई रोक्न नै मलाई गार्हो भयो। उसलाई खोज्न काठमाडौ ने पुगे। एक हप्ताको बसाइ सक्याएर आफ्नो घरतिर लाग्न बस पार्क पुगे र भौतारिदै थिए। कस्तो अचम्म उसले चलाउने गरेको ट्रक बस पार्कको छेउमा देखे। उसलाई देखे पछि मेरो भित्र रहेको खुसी बाढी झै रोकिएन अनि मेरो आँखा भरि फैलियो। अति खुसीले गर्दा आँखाबाट झरेको आँसु पुछ्दै भने –केही समय बीरगंज तिर नै रोकिन्छु यता आउन पाइन्न भन्नु पर्दैनथ्यो। के भयो किन यता नआएको भनेर म कम छटपटिए?’
‘मेरो कुरा सुने पछि उसले हाँस्दै भन्यो- लौ, किन त्यसरी छटपटिएकीउ त?’
‘कुनै खबर बिन यत्रो दिन बस्दा हामीलाई चिंता हुँदैन र?’
‘मेरो बारेमा तिमीले किन चिन्ता लिनु पर्यो? म तिम्रो को हुँ र?’
‘मैलै फेरि आश्चर्य मान्दै प्रश्न गरे- म तिम्रो को हु भन्ने कुरा मसँग होइन, आफूले आफैसँग सोध न?’
‘उसले फेरि भन्यो- बढी लामो कुरा नगर, जाउ। मलाई यहाँ काम गर्न देउ।’
‘उसको त्यस्तो कुरा सुनेर म आकास बाट झरे झै भए। मेरो मुटुमा शुल नै रोपियो। मलाई भक्कानिएर रुन मन लाग्यो। तर पनि आफूलाई रोक्दै भने- अनि, तिमीले गरेका ती मिठा मिठा कुराहरु, पोते तिलहरी अनि सिन्दुरका कुराहरु के थिए? सबै झुठ र अर्थनबर्थका?’
यति भनेर सुन्तली चुप लागिन् अनि रुन पनि थालिन। म पनि मौन नै बसें। अनि त्यस पछि के भयो हँ सुन्तली, भनी सोध्न मलाई मन लागेन।
एकै छिन रोए पछि आँशु पुछ्दै सुन्तलीले भनिन ‘त्यति मात्र भनेको भए त मेरो यो मुटु टुक्रा टुक्रा हुने थिएन। उसको त्यो अर्को कुराले पो मेरो मुटु छिया छिया पार्यो। उसले मलाई के भन्यो दाई, थाहा छ? उसले भन्यो- तिम्रो फाल्तु कुरा सुन्ने फुर्सत छैन मसँग। म मात्र होइन त्यो होटलमा तिमी सँग सुत्न आउने सबैले भनेका होलान् मैले तिमीलाई भने जस्तो। म पहिलो मान्छे होइन। यति भनेर ऊ गललल हाँस्यो। छेउमा रहेका उसका साथीहरु पनि गललल हाँसे।’
सुन्तली रोई नै रहेकी थिइन। म उनको छेउमा मौन थिएँ। सुन्तलीको मुखबाट कुनै शब्द निस्किन सकिरहेको थिएन, न त मेरो मुखबाट नै।